Ungayibuyisela Kanjani Imali Kumdlalo ku-Steam? (Umhlahlandlela wesicelo) - Ukudlala
Ngabe ufuna ukubuyisa imali kumdlalo ku-Steam?Yebo, sikubuyisele!Ulande umdlalo ikhava yakhe ebibukeka iyinhle kodwa yajika yaba yinto obungayilindele?Ngemuva kwalokho ungakhathazeki, ungabuyisa imali kumdlalo ku-Steam. Silungiselele okuthunyelwe okuphelele okuhlanganise konke okudingekayo ukuthola imbuyiselo ku-Steam.
Lo mhlahlandlela uzohlanganisa izinyathelo ezidingekayo ukuze uthole imbuyiselo ku-Steam, ukufaneleka kokuthola imbuyiselo ku-Steam, neminye imibuzo evame ukubuzwa ukukusiza.Ngakho-ke nika lokhu okuthunyelwe ukufundwa ukuze wazi konke mayelana nokubuyiselwa kwemali kwe-Steam.
Ubhekene nezinkinga nge-Steam yakho? Hlola Intuthu Ayisebenzi Umhlahlandlela.
Izinyathelo zokubuyisa imali kumdlalo ku-Steam:
Ukuthola imbuyiselo ngomdlalo wakho kulula kakhulu futhi akuwona umsebenzi wokuhlupha uma ulandela nathi. Sishilo isinyathelo ngasinye ngokuningiliziwe ukuze uthole ukubuyiselwa imali kalula ku-Steam. Nazi izinyathelo ongathola kuzo ukubuyiselwa kwemali:
Qalisa umusi ngokuchofoza lapha . Lesi isiza sokweseka iSteam lapho uzothola khona izinketho eziningi ongakhetha kuzo nge-akhawunti yakho.
Lapho usethule ukuxhaswa kwe-Steam, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Steam.
Ngemuva kokungena ngemvume, uzofakwa kuzilungiselelo ze-akhawunti yakho. Khetha kuthebhu ethi ‘Thenga’, okuzokusa kukuthenga okwenzile.
Manje, uzoba nohlu lwemidlalo oyithengile. Manje khetha umdlalo ofuna ukuqala ngawo ukubuyiselwa imali kwawo.
Lapho usukhethe umdlalo, uSteam uzobuza ukuthi kungani ufuna ukubuyiselwa imali yomdlalo. Ungakhetha noma yisiphi isizathu esisodwa kulezi zinhlu ezimbili ezinikeziwe.
Manje, uSteam uzokubuza ukuthi ngabe ufuna ukubuyiselwa imali noma ulungise inkinga yezobuchwepheshe. Kufanele ukhethe inketho yokubuyiselwa kwemali. Manje uzoyiswa ekhasini lembuyiselo lapho ungagcwalisa khona ifomu lembuyiselo.
Kuleli khasi, ungakhetha lapho ufuna ukubuyiselwa imali uma ufuna ukubuyiselwa imali ku-akhawunti yakho yasebhange noma ku-Steam Wallet. I-Steam ikumbozele izinketho zokukhokha. Ungakhetha inketho yokukhokha bese uqhafaza ku-'Faka isicelo, 'ekhona ekhoneni elingezansi ngakwesokunxele kwesikrini sakho.
Ngemuva kokulandela ngempumelelo zonke lezi zinyathelo ngokucophelela, uzothola imbuyiselo yomdlalo wakho ngaphandle kokwenqatshwa.
Gwema Ukwenqatshwa Kokubuyiselwa Imali Kwe-Steam- Ukufanelekela Ukubuyiselwa Imali
Kunemithetho ethile ongathola ngayo ukubuyiselwa imali. Udinga ukuyinakekela le mithetho ngaphambi kokufaka isicelo sokubuyiselwa imali ukuze unganqatshwa kwi-Steam Game Refund. Nayi eminye imigomo uSteam okufanele ayemukele Ukubuyiselwa Imali.
Ukubuyiselwa kwemali kuzoqaliswa futhi kwamukelwe uma umdlalo ubuyiselwa futhi ubuyiselwa imali kungakapheli izinsuku eziyi-14 kuthengiwe umdlalo.
Umdlalo uzobuyiselwa imali kuphela uma ngabe udlale lo mdlalo imizuzu engaphansi kwengu-120. Uma igeyimu idlala ngisho nama-spikes kumaminithi ayi-121, uzokwenqatshwa ngokubuyiselwa imali.
Imibandela yokubuyiselwa kwemali kwe-Steam inzima kakhulu, futhi ihambisana nale mithetho njalo. Ngakho-ke, cabanga ngalezi zinto ngaphambi kokucela ukubuyiselwa imali.
1Q. Kuthatha isikhathi esingakanani ukubuyiselwa kwemali kwe-Steam?
Iminyaka:Ngemuva kokuthi imali yakho ebuyisiwe ye-Steam yamukelwe, imali ebuyiswayo ithatha kuphela cishe amahora we-2-3. Uma ukhethe ukudluliswa kwesikhwama samazwe omhlaba, kungathatha izinsuku eziyi-5-7 zokusebenza.
2Q. Uyini umkhawulo wokubuyiselwa imali ku-Steam?
Iminyaka:Awukho umkhawulo oshiwo yi-Steam, kushiwo inani lembuyiselo eliqaliswe ngumsebenzisi. Kepha uma uzama ukubuyisa yonke imali oyithengayo, uSteam angahle akuvimbe okwesikhashana ekubuyiselweni kwemali.
3Q. Yiziphi ezinye izihloko ezintsha eza ngo-2021 ku-Steam?
Iminyaka:Nge-console elandelayo ye-Gen eshintshe ukudlala, imidlalo nayo iguqukile ukuze ime iqinile emakethe. Nayi imidlalo ephezulu engu-3 ezayo ngo-2021:
Ububi Genius 2.
Siyethemba ukuthi okuthunyelwe kwethu kuyisebenzele injongo yakho futhi kukusize ekutholeni imbuyiselo yemidlalo. Uma uneminye imicabango noma imibuzo maqondana nokubuyiselwa kwemali kwe-Steam GAme, ungakushiya ebhokisini lokuphawula elingezansi.
guqula uhlu lwadlalwayo lwe-youtube lube yi-mp3
movie4k, bukela ama-movie online, ukulanda kwama-movie mahhala
Izinhlelo zokusebenza ze-samsung smart tv ama-movie wamahhala
ukulandwa kwesipiliyoni se-geforce akusebenzi
bukela ama-movie we-hd online mahhala ngaphandle kokubhaliswa